Prusa i3 MK3, iphrinta entsha evela kuJosef Prusa | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
I-Prusa i3 MK3, iphrinta entsha evela kuJosef Prusa
UJoaquin Garcia Cobo | | Ukuphrinta kwe-3D
Uma sikhuluma ngamaphrinta wamahhala e-3D, ngokuqinisekile igama "Prusa" liyavela, igama elixhunyaniswe nomdali walo, ngokungangabazeki. UJosef Prusa, umakhi wale modeli yephrinta, uyaqhubeka nokusebenza kuphrinta ye-Prusa, ethula ngezikhathi ezithile imodeli entsha yephrinta ye-3D.
Muva nje UJosef Prusa wethule imodeli iPrusa i3 MK3, ngemuva nje kokwethulwa kwamaPrusa i3 MK2s. Futhi ngaphandle kokuba nokwethulwa okusondele kangaka, iphrinta entsha yePrusa yethula intuthuko ebalulekile ezokwamukelwa ngamanye amamodeli amaningi wamaphrinta we-3D.
IPrusa i3 MK3 ayiqukethe ubuchwepheshe obusha be-extruder noma ukuxhumana okusha okungenantambo, kepha yenza izinguquko ekuphrintweni kwezingxenye, okwenza kube lula ukufingqa umbono. Okuthile okuwusizo uma, ngokwesibonelo, siphelelwa yiroli yempahla noma uma ukuphrinta kunqunyiwe ngenxa yokunqamuka kukagesi noma ezinye izimo eziphuthumayo.
Isisekelo esishisayo senziwe ngozibuthe, into eyenza ukuthi kukwazi ukushintsha umbhede ngesikhathi sokuphrinta noma kunalokho kusike okuphrintiwe ngoba ngesikhathi sokuphrinta ngeke sikwazi ukuguqula umbhede oshisayo. Le modeli entsha inehadiwe evumela ukwenziwa okuncane okungama-256 okwenza iphrinta izothula ngesikhathi sokuphrinta futhi kunembe kakhulu kunamamodeli wangaphambilini.
Iphrinta ye-Prusa i3 MK3 manje isinga-odwa ngaphambili ku-Josef Prusa Official Store. Izindleko ze le modeli icishe ibe ngama-euro angama-749 futhi izoqala ukudayiswa ngoNovemba ozayo. Yize kufanele sisho ukuthi iphrinta ye-Prusa i3 iyimodeli elula kakhulu yephrinta ye-3D engaphindwa futhi ngakho-ke, kungekudala singaba nemodeli ye-aftermarket enemisebenzi efanayo noma neminye ethuthukisa ukusebenza nokusebenza izinto zokuphrinta. Kunoma ikuphi, ku iwebhusayithi esemthethweni kaJosef Prusa uzothola eminye imininingwane.
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » Ukuphrinta kwe-3D » I-Prusa i3 MK3, iphrinta entsha evela kuJosef Prusa
Le software izokuvumela ukuthi udale izindawo ezigobile ze-3D
UHod Lipson usikhombisa isizukulwane sakhe esisha semisipha ephrintiwe yamarobhothi